192.168.8.1 - Okusondele
Yakha inethiwekhi engenantambo ngabanamandla Okusemile I-AC noma i-N router. Ingabe ukhetha ukuxhumeka ku-inthanethi kwe-PC yakho? Azikho izingqinamba. Ngendlela yama-Eminent Routers wena surly uzoba nokuxhumana okuzinzile nokusheshayo kwe-Intanethi.
Ama-routers avelele ane-firewall elula esiza ekuvikeleni inethiwekhi yakho esekwe ekhaya ukufinyelela okungathandeki ku-inthanethi. Njengoba le firewall ivimbela ukuxhumana kwangaphakathi ungadinga ukuvula itheku ngayo ngezinhlelo ezithile nemidlalo. Le ndlela yokuvulwa kwetheku ivame ukubizwa nge-port phambili ngoba uthumela itheku ngokusebenzisa i-inthanethi kunethiwekhi yakho esekwe ekhaya.
Nge-Eminent Wireless 300N Router ungabelana ngenethiwekhi yakho ngejubane eliphakeme kakhulu nge-300Mbps. Le rutha ye-Wireless N enamandla eduze kwama-aerial amabili ikhuphula kakhulu ibanga lakho elingenantambo. Mane unamathisele abasebenzisi abaningi, izintambo noma izintambo. Yiba nenzuzo yesivinini esikhulu, nendlela engenamandla yokuveza ukuxhumana kwakho. Ngenxa yejubane elikhulu, i-Wireless Router ilungele ukudlala imidlalo eku-inthanethi nokusakaza umculo nevidiyo.
Kumakhasimende wenethiwekhi athuthukisiwe, kulungile ukuqonda ukuthi i-Eminent Wireless Router inezici eziningana eziyinkimbinkimbi. Faka isicelo se-WDS & i-Wireless Bridge isebenza ukukhulisa amasiginali wakho ngaphandle kwentambo. Ngenxa yeprosesa yejubane eliphezulu & 'Traffic Checking' IP ngayinye, itheku noma iProthokholi, ungaqinisekisa ukuthi ungahlala udlala noma uvulela i-inthanethi isivinini kakhulu.
Ama-SSID angeziwe angangezwa ngokuzikhandla futhi ahlukaniswe uma kudingeka. Lokhu kukuvumela ukuthi usethe ngokushesha futhi kalula amanethiwekhi wesibili wabasebenzisi bezivakashi. Lokhu kuhle ezindaweni zebhizinisi ezifana nehhotela noma i-hotspot, isibonelo, lapho ufuna ukuhlukanisa izivakashi kunethiwekhi yakho yebhizinisi.
I-Eminent 300N Wireless Router ingasetshenziswa ngisho namathuluzi afinyelelekayo angama-54 Mbps & 11 Mbps. Ngobubanzi obugcwele nesivinini esingama-300 Mbps, kuyalulekwa ukuthi usebenzise izixhumi zenethiwekhi ezingenantambo ze-Eminent.
Inqubo enkulu yokuvula itheku yile:
Setha ikheli le-IP elinqunyelwe ku-PC noma ithuluzi lakho lapho udinga ukuthumela itheku khona.
Ngena ngemvume kumzila we-Eminent.
Iya kusigaba sokudlulisa imbobo.
Ngokuchofoza inkinobho yokusetha idivayisi.
Ukuchofoza kusixhumanisi sokusetha kwangaphambili.
Ukuchofoza ku-NAT / Transmitting.
Ukuchofoza ku-Port Advancing.
Khiqiza ukungena kokudlulisa imbobo.
Yize izinyathelo ezinjalo zingavela zikhohlise ekuqaleni, vele uhambe ngezinyathelo ezingezansi zomzila wakho we-Eminent.
Kubalulekile ukusetha ikheli le-IP elinqunyelwe kuthuluzi othumela kulo itheku. Lokhu kuqinisekisa ukuthi amachweba azohlala evulekile ngisho nangemva kokuba ithuluzi liqale kabusha. Lapho uhlela ikheli le-IP elinqunyiwe kumadivayisi owadingayo ukungena ku-router.
Manje kufanele ungene ngemvume kumzila we-Eminent. I-router ine-interface yewebhu, ngakho-ke ungangena ngemvume kuyo ngesiphequluli sewebhu. Lokhu kungaba yinoma iyiphi i-Google Chrome, i-Edge, i-Opera, noma i-Internet Explorer. Imvamisa akunandaba ukuthi ukhetha ukusebenzisa siphi isiphequluli. Ikheli le-IP lomzila wakho lingabizwa nangokuthi isango elizenzakalelayo le-PC.